Sekuqalwe uphenyo ngengozi yokushayisana kwezitimela – LIVE Express
Sekuqaliswe uphenyo ngembangela yengozi yokushayisana kwezitimela ezimbili neholele ekulimaleni kwabantu abangaphezu kwe-120 e-Lamontville, eningizimu neTheku.
uNgqongqoshe wezokuthutha, u-Dipuo Peters, ukuqinisekisile ngoLwesihlanu ukuthi ibhodi elihlanganisa u-Passenger Rail Agency of South Africa (Prasa) kanye no-Transnet lizophenya ngembangela yokushayisana kwalezi zitimela zombili.
Kubikwa ukuthi lezi zitimela zitholane phezulu phakathi kwe-Havenside kanye ne-Merebank ngaphansi kwebhuloho.
Uphenyo lwesikhashana lukhomba ukuthi ukhona umuntu obe nephutha ehhovisi elilawula ukuhamba kwezitimela ngenxa yokuthi zombili izitimela ziye zavunyelwa ukuthi zihambe emzileni owodwa ngesikhathi esisodwa.
Abagibeli abangama-121, okuhlanganisa nabashayeli ababili kanye nonogada ababili baka-Metrorail, bathole ukulimala okungatheni kanti sebekhishiwe esibhedlela.